बमको त्रास : ओली–प्रचण्डको कार्यक्रममा मेटल डिटेक्टरदेखि झोला खानतलासीसम्म (फोटोफिचर) | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-10-22T22:10:06.102356+05:45
personविजु महर्जन access_timeकात्तिक २९, २०७४ chat_bubble_outline0
गोरखा । बाम गठबन्धनले आजदेखि देशका विभिन्न स्थानमा संयुक्त चुनावी सभा शुरु गर्दैछ । यस अन्तर्गत नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका शीर्ष नेताहरुले गोरखाको पालुङटारमा पहिलो सभाको आयोजना गर्दैछ ।
विप्लव पार्टीको कमान्डर लमजुङ पसिन्, देव गुरुङमाथि सुरक्षा थ्रेट !
पार्टी छाडेर चुनाव लड्ने यी नेता कति सुरक्षित ?
विजु महर्जन फोटो पत्रकार हुन् ।